Tijaabo adag oo hortaalla Ra'iisulwasaaraha Canada - BBC News Somali
25 Disembar 2017
Image caption Ra'iisulwasaaraha Canada Justin Trudeau
Sannadkan 2017-ka, ra'iisulwasaaraha Canada wuxuu bartay cashar rasmi ah, kaasi oo ah awoodda baraha bulshada iyo saameyntooda.
Farriin uu boggiisa twitter-ka ku diray bishii janaayo ee sanadkan ayaa noqotay tii ugu saameynta badnayd, waxaana sii faafiyay 418,000 oo ruux, halka ay astaanta jamashada saareen 768,000 qof.
Fariintan oo ku saabsanayd isaga oo soo dhaweynayo qaxootiga Suuriyaanka ah ayaa waxay kusoo beegantay xilli madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu soo saaray mamnuucis socdaalka ah oo ku aaddan 7 dal oo Islaam ah.
Balse taas dhibkeeda ayay la timid, xuduudaha Canada ayaa waxaa ka talaabay 18,615 qof oo soo galooti sharci daro ah.
Hadda saraakiisha Canada waxay billaabeen in ay sharaxaan in Canada uu ka jiro sharci qabanaya qofkasta, qofkii yimaadana aanan horay laga qaabilaynin.
Xisbiyada mucaaradka ayaa bilaabay in ay Ra'isulwasaaraha ku eedeeyaan in fariintiisa ay dadka ku dhiirigalisay in ay si sharci darro ah kusoo galaan Canada.
Canada: Tuulo u heellan soo dhawaynta qaxootiga
Amiir Harry oo Canada ku arkay nin u eg
Sida ay sheegtay Janet Dench oo ah agaasimaha wakaaladda qaxootiga Canada, waxaa si wanaagsan loo maamulay dadka magangalyo doonka ah, balse waxay sheegtay in dowladda aysan wali kordhinin miisaaniyadda wakaaladdan si ay u maareyso dacwooyinka magangalyo doonka ah ee horyaalla.
Image caption Wasiirka maaliyadda ee Canada Bill Morneau
Arrimaha kale ee madax xannuunka leh ee Ra'isulwasaaraha horyaalla sannadkan 2018-ka waxaa ka mid ah arrimo la xiriira anshax dhaqameedka, kadib markii guddi ka shaqeeya anshaxa uu Ra'isulwasaaraha ku helay in uu xad gudub sameeyay kadib fasax dalxiis ah oo uu ku tagay jasiirad uu leeyahay nin saaxiibkii ah.
Waxaa kale oo uu dhibaato kala kulmay in uu sheegi waayay guri weyn oo uu Faransiiska ku leeyahay.
Sidoo kale arrimo ku saabsan hantidiisa iyo ganacsiyo uu leeyahay ayuu kala kulmay dhib markii la meelmarinayay sharciga canshuuraha ganacsiyada yaryar.
Sida lagu sheegay ra'yi aruurin uu sameeyay machadka Angus Reid ayaa lagu sheegay in markii ugu horeysay taareegada loo hayo Trudaue ay hoos uga dhacday boqolkiiba 50%.
Mid ka mid ah waxyaabaha lagu heysto waxaa ka mid ah wasiirkiisa maaliyadda oo ay fadeexado kusoo baxeen.
Sannadkan labo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ayaa doortay hoggaamiyeyaal cusub, waxayna tani ka dhigantahay ayaa la leeyahay in dowladda ay markan wajahayso mucaarad aad u abaabulan.
Canada oo raaligelin siinaysa nin ka mid ahaa maxaabiistii Guantanamo
Sanadkan dhammaadkiisa waxaa ay dowladda Trudaue ku guul daraysatay in guulo laga gaaro wadahadaladii mashruuca NAFTA ee u dhaxeeya Maraykanka, Canada iyo Mexico.
Lahaanshaha sawirka Pool/Getty Images
Image caption Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa billaabay wadahadallo cusub oo Nafta ah sannadkan 2017ka
Guddoomiyaha rugta ganacsiga ee Canada Perrin Beatty ayaa yiri "Wadahadala NAFTA waxay ku xiranyihiin sida uu ku fikiro qofka fadhiya Aqalka Cad, subax inta iska soo koco ayuu samayn karaa waxa uu doono".
Fal dembiyeedyada nacaybka ku salaysan oo Canada ku soo kordhaya
Gobol ku yaalla Canada oo mamnuucay indha-shareerka
Heshiiska ganacsiga ee Canada iyo EU oo burbur ku dhow
NAFTA , waa heshiis ganacsi xor ah oo u dhaxeeya saddexda dal, hase yeeshee tan iyo intii uu yimid madaxweyne Donald Trump waxaa heshiiskaas lasoo gudboonaaday caqabado, Canada-na waxa ay ku qasbantahay in ay hadda raadsato dalal cusub oo ay heshiisyo ganacsi la gasho.